You're Hired - အပိုင်း (၈) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on December 19, 2011 at 11:06 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-8 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.
Marcia wrote an email to one of the candidates giving them the news that they have not got the job.
(မာစီယာသည် အလုပ်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထံသို့ အလုပ်မရရှိကြောင်း email ရေးပို့သည်။)
Marcia Boardman : …ok…ok…that’s great! We’ll be pleased to have you on the team! Looking forward to seeing you next week! Bye!
(…ကောင်းပြီ…ကောင်းပြီ… အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမှာကို ၀မ်းသာပါတယ်။ နောက်အပတ်မှ တွေ့ကြမယ်! တာ့တာ!)
Philip Hart : Was that Sarah?
Marcia Boardman : Yes – she’s going to accept the job, and wants to come in next week forachat …
(ဟုတ်တယ် - သူက အလုပ်ကို လက်ခံမယ်တဲ့ ပြီးတော့ နောက်အပတ်မှာ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် လာခဲ့မယ်တဲ့…)
Philip Hart :
Great news. Now you just have to tell the other guy that we don’t want him … (သတင်းကောင်းပဲ။ ကဲ အခုတစ်ခါ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကို သူ့ကို ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ခင်ဗျားအကြောင်းကြားဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်…)
Marcia Boardman :
I hate giving bad news … (သတင်းဆိုးပေးရမှာ အရမ်းမုန်းတာပဲ…)
Philip Hart : I’m glad that it’s your job and not mine!
(အဲ့ဒါ ကျွန်တော့်အလုပ်မဟုတ်ဘဲ ခင်ဗျားအလုပ်ဖြစ်နေတာ တော်သေးတာပေါ့!)
Marcia Boardman : Ok, may as well do it straightaway… Dear Mr. Watson…we regret to inform you that you have not go the job…hmm…soundabit too direct…How about…’Dear Mr. Watson, Thank you for your application to WebWare. We regret to inform you that you weren’t successful.’
(ကောင်းပြီလေ။ ချက်ချင်းလုပ်လိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်…မစ္စတာ ၀က်ဆန်ရှင့်…လျှောက်ထားသည့် အလုပ်ကို မရရှိကြောင်းကို ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။…အင်း…သိပ်ပြီး တဲ့တိုးကြီြး့ဖစ်နေတယ်…ဒီလိုဆိုရင်ရော… “မစ္စတာ ၀က်ဆန်ရှင့်၊ WebWare ကို အလုပ်လာလျှောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်မအောင်မြင်ကြောင်းကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။”)
Philip Hart : Hmmm…I think you should say something positive.
Marcia Boardman : But he was terrible!
(ဒါပေမယ့်သူက အရမ်းကို ညံ့တာလေ!)
Philip Hart : Well, he wasn’t great, no, but, I think we should be positive and polite.
(အင်း၊ သူကအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ အကောင်းဘက်က လှည့်ပြောသင့်တယ်။)
Marcia Boardman : Yes, you’re absolutely right. OK how about this ‘Dear Mr. Watson. Thank you for your application to WebWare. You wereapromising candidate. However, we regret to inform you that the competition for the post was very strong, and we will not be offering you the position. Yours sincerely, etc etc…’
(ဟုတ်တယ်၊ ရှင်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီလိုဆိုရင်ကော “မစ္စတာ ၀က်ဆန်ရှင့်။ WebWare မှာ အလုပ်လျှောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှင်ဟာအလားအလာရှိတဲ့ လျှောက်လွှာရင်တစ်ဦးပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဤရာထူးအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပဲ ရှင့်ကို အလုပ်ခန့်ထားနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့်။ စသည်ဖြင့်ပေါ့…”
Philip Hart : Yes, that’s more like it…but we should include some feedback…
(အင်း၊ အဲဒါကမှပိုကောင်းသေးတယ်..ဒါပေမယ့် သုံးသပ်ချက်လေးလည်းထည့်ပေးသင့်တယ်။)
Marcia Boardman : Of course – how about if I add this: “In future, you may wish to moderate your personal style, and carefully fact check your CV…” How does that sound?
(ဟုတ်တာပေါ့ - ဒါလေးထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲ “အနာဂတ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပန်များကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ပါအချက်အလက်များကို သေချာစွာ စစ်ဆေးသင့်ပါသည်..” ဆိုရင်ကောင်းမလား?)
Philip Hart : I’m not sure what ‘moderate your personal style’ means. It’sabit vague…
(ကိုယ်ပိုင်ဟန်ပန်များကို ထိန်သိမ်းပါဆိုတာကို သိပ်မရှင်းဘူး။ သိပ်ပြီး မရေရာဘူး…)
Marcia Boardman : Hmm…ok, how about ‘give more specific examples of your achievements, and show how you work as part ofateam’.
(အင်း…ကောင်းပြီလေ၊ “ရှင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများအတွက် ပိုတိကျတဲ့ ဥပမာတွေပေးပြီး အသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြပါ။” ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုနေမလဲ?)
Philip Hart : Ok, yes, I like that… and remember to finish with something like, ‘We wish you the best of luck in the future’!
(ကောင်းတယ်။ အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်…ပြီးတော့ အဆုံးသတ်မှာ “ရှေ့လျှောက် ကံကောင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်”ဆိုတာလဲ ထည့်ဖို့မမေ့နဲ့ဦး။)
Marcia Boardman : Of course – I certainly do wish him luck! Ok – done. I’ll send it now.
(ဒါပေါ့ - ကျွန်မလည်းသူ့ကို ကံကောင်းစေဖို့သေသေချာချာ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ- အခုပဲပို့လိုက်တော့မယ်။)
Permalink Reply by Than Oo on December 19, 2011 at 16:26
Can I download the video file? If yes, please let me know how to download it.
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on December 25, 2011 at 21:17
ဆော့ဝဲမလို လွယ်ကူစွာဒေါင်းလော့ဆွဲလို့ရပါတယ်.. အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ
Download Youtube Video + 3.3.51(Myanmar Network)
ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ရင် Music နဲ့ Video တွေအပြင် Document တွေကိုပါ ဒေါင်းလေ့ာဆွဲနိုင်သည့်အထိ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် ဒီပိုစ့်ကိုရေးတုန်းက Version က 3.3.51 ရှိပါသေးတယ်။
အခုလက်ရှိ Update က 8.0 ထိရှိနေပါပြီ ....
နောက်ထပ်လေ့လာချင်သေးရင် ကျနေ်ာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လင့်မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by myatthuhein on December 25, 2011 at 9:59
လိုချင်တဲ့ စာသားဆီကိုသွားပါ ပြီးရင် မောက်စ်နဲ့ စာသားပေါ်မှာ selection ပေးပြီးရင် right click နှိပ် ပြီးရင် copy လုပ် ပြီးရင်
microsoft word ကိုဖွင့်ထားပေးပါ ခုန copy လုပ်ထားတာကို word မှာ paste လုပ်လိုက် ပြီးရင် word မှာ အတုံးလေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ် ဒါ ဆိုရင် အဲဒီအတုံးလေးတွေကို အားလုံး select လုပ် ပြီးရင် word မှာ font box မှာ font chage ရမယ် zawgyione လို့ပြောင်းလိုက်ရင် ရသွားပါပြီ